जिब्रो पड्काउँदै जिस्काउने केटा देखि रिस उठ्छ - सरूपा थापामगर - Tamang Online
फेसन नगरीका रूपमा परिचित धरानमा रहेर अध्ययनसँगै मोडलिङलाई अँगालेकी एक चर्चित मोडेल हुन्, सरूपा थापामगर । धरानस्थित वीरेन्द्र मेमोरियल कलेजमा बीबीएस पहिलो वर्ष अध्ययनरत उनको लक्ष्य सफल नायिका बन्ने रहेको छ । आरजेका रूपमा समेत परिचित उनी धरानमा सञ्चालित विजयपुर एफएमकी कार्यक्रम प्रस्तोता पनि हुन् । पाँच फिट दुई इन्च अग्ली २१ वर्षीया सरूपा मिस मंगोल नेपाल २०१५ की फस्ट रनरअप हुन् ।
अचेल केमा व्यस्त ?
बिहान ६ बजे कलेज जान्छु । कलेजबाट फर्केपछि रेडियो प्रस्तोताका रूपमा काम गर्छु । सामाजिक कार्यक्रममा भाग लिएर आफ्नो व्यक्तित्व विकासलाई पनि अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेकी छु ।
समाजमा कुन रूपमा चिनिन चाहनुहुन्छ ?
मोडलका रूपमा आफूलाई परिचित गराउन चाहन्छु । भविष्यको लक्ष्य त नायिका बन्ने हो । रेडियो प्रस्तोताका रूपमा काम गरिरहेकाले समाजले सञ्चारकर्मीका रूपमा चिन्ने गरेको छ तर समग्रमा म एक असल नारीका रूपमा स्थापित हुन चाहन्छु ।
मोडलिङमा लाग्ने सोच कसरी आयो ?
धरान फेसनेबल सहर भएकाले बेलाबेलामा हुने फेसन सोमा भाग लिएपछि मोडलिङ क्षेत्रमा रुचि बढ्यो । मलाई सानैदेखि सौन्दर्य प्रतियोगिताप्रति रुचि थियो । मिस मगर नेपाल २०१४ पछि मिस मंगोल नेपाल २०१५ मा सहभागी भई फस्ट रनरअप भएँ । यो उपलब्धिले मलाई यस क्षेत्रमा चिनायो ।
धरानमा बसेर मोडलिङ एवं अभिनयलाई अगाडि बढाउन सकिएला त ?
काम गर्न काठमाडौंमै बस्नुपर्छ भन्ने छैन । क्षमतावान् व्यक्तिले मोफसलमा बसेर पनि करिअरलाई स्थापित गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ । धरान अवसर भएको सहर पनि हो । त्यसैले यहीँ बसेर करिअर बनाउन सक्छु भनेर लागिपरेकी छु ।
यस क्षेत्रमा लागेर प्राप्त गरेको उपलब्धि ?
मलाई चिनाएको यही क्षेत्रले हो । आत्मविश्वास, व्यक्तित्व विकासमा धेरै सहयोग पुगेको छ जुन हरेक व्यक्तिका लागि आवश्यक छ । काम गर्ने अवसर पाएको छु, सामाजिक पहिचान बनेको छ ।
मोडलिङमा परिवारको साथ ?
परिवारको साथ नपाएको भए यो ठाउँसम्म आउन सक्ने थिइनँ । बुवाआमाले सपोर्ट गर्नुभएको छ । आफूले चाहेको क्षेत्रमा केही गर तर पढाइ नबिगार भनेर बेलाबेलामा बुवाआमाले सम्झाउनुहुन्छ । म पढाइमा पनि त्यत्तिकै मेहनत गरिरहेकी छु ।
तपाईंको बुझाइमा ग्ल्यामर के हो ?
फेसनेबल, सुन्दर र आकर्षक देखिनु नै ग्ल्यामर हो । ग्ल्यामरमा व्यक्तित्व झल्किन्छ । नयाँ पुस्ता ग्ल्यामरप्रति आकर्षित छन् र यो आवश्यक पनि छ ।
आफूलाई ग्ल्यामरस देखाउन के गर्नुहुन्छ ?
मेकअपमा ध्यान दिन्छु । शरीरलाई फिट एन्ड फाइन राख्छु । समयअनुसारका फेसनेबल एवं आफ्नो शरीरअनुसार सुहाउँदो पोसाकमा छोरी मान्छेको ग्ल्यामरस र सेक्सी छवि झल्किन्छ । म त्यसमा सचेत छु ।
ग्ल्यामर र अंग प्रदर्शनको सम्बन्ध ?
अंग प्रदर्शन फरक कुरा हो । अंग प्रदर्शन गरेर ग्ल्यामरस हुने पनि होइन । तर अहिले फेसनेबल र छोटो पहिरन लगायो भने अंग प्रदर्शन भन्छन्, त्योचाहिँ गलत हो ।
तपाईंलाई ग्ल्यामरस लाग्ने मोडेल र नायिका ?
नायिकामा नम्रता श्रेष्ठ र प्रियंका कार्की । मोडलमा आस्था पोखरेल ग्ल्यामरस लाग्छ । उहाँहरूको ड्रेसिङ सेन्स मन पर्छ ।
माया गर्छु भनेर केटाहरूले कत्तिको पछ्याउँछन् ?
भनेर साध्य छैन । फेसबुक, एसएमएसमार्फत कति धेरैले प्रेम प्रस्ताव राख्छन् भने मलाई दिक्क लागेर मोबाइल नम्बर नै परिवर्तन गरेकी छु ।
बाटो हिँड्दा केटाहरूले कत्तिको जिस्क्याउँछन् ?
जिस्क्याउँछन् । जिब्रो पड्काउँछन् तर त्यस्ता केटा देख्दा मलाई रिस उठ्छ ।
सपनाको राजकुमार कस्तो होस् भन्ने लाग्छ ?
जाँडरक्सी नखाने, पढेलेखेको, आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्ने, इमानदार, मलाई माया गर्ने र जीवनभर साथ दिने होस् । सायद सबैको चाहना यस्तै हुन्छ होला ।
कसैसँग मायाप्रेम ?
दुई वर्षअगाडि एउटा केटासँग लभ परेको थियो तर उसको आचरण मन नपरेकाले छाडिदिए । बैंसको प्रेममा भावनाभन्दा आकर्षण बढी हुने भएकाले भर गर्न नसकिने रहेछ । @ अन्नपुर्णपोस्ट |
« आमाको अर्कै संग बिहे, औषधि नपाएर बुबाको मृत्यू , छोरीको अलपत्र (Previous News)
(Next News) हलिउड सुन्दरी किमकिम कादर्सिनले अमेरिकी निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पलार्इ भेट्न मानिनन् »